ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ယိုကျလာသော အတွေးစများ”
(ဘယ်သူလဲ ???) အဲဒါ။ ဗန်းမော် ဆရာတော်။ ဟဲဟဲ။ ဒီလောက်ကတော့ မှတ်မိသေးတယ်။
ကျွန်တော်ကြုံဖူးတာက ဂုန်နီအိတ်ကို အပေါ်အပြည့်ကာပြီး အောက်ပိုင်းလွတ်နေတဲ့ အိမ်သာပါ ဂုန်နီအိတ်မလောက်လို့လားတော့မသိ အိမ်သာကမြင့်ရတဲ့အထဲ အဝေးကလှမ်းကြည့်ရင် အောက်ပိုင်းတွဲလောင်းကိုထင်းကနဲဘဲ ဒါနဲ့ အိမ်ရှင် အဒေါ်ကြီးကို အောက်ပိုင်း နည်းနည်းနိမ့်ပြီး ပြန်ကာဖို့ ပြောတော့ သူက ရှက်တာကအပေါ်ပိုင်းပါ ငါ့တူရယ် မလုပ်ပါနဲ့လို့တားတယ်ဗျာ သူကတော့ ကိုပေါ ပြောသလို အရှက်ကမျက်နှာမှာပေါ့ ကျောက်ပန်းတောင်း ဆည်ပေါက်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ်ကရောက်တော့ အိမ်သာတက်ခြင်လာ တယ် အချိန်က ညဦးပိုင်းဖြစ်တော့ ဆေးပေါ့လိပ်ပေးကာ အိမ်ရှင်ခေါ်တဲ့ သဲချောင်းထဲလိုက်သွားတယ် ပြီးတော့ ကိစ္စရှင်းပေါ့ လူသံကြားရင် ဆေးလိပ်မီးရဲအောင် ဖွာပြလိုက် သူလဲ တခြားနေရာသွား ဆေးလိပ် တဖွာဖွာနဲ့ ကိစ္စရှင်းတာပေါ့ ချောင်းရိုးတလျှောက် မှောင်မှောင်မည်းမည်း ဆေးလိပ်မီးတရဲရဲတွေ အများကြီးပေါ့ နံနက်ပိုင်းဘယ်လိုလုပ်သလဲလို့ အိမ်ရှင်မေးတော့ သဲချောင်းထဲစကော လေးယူသွားပေါ့တဲ့
တရုတ်ပြည်မှာဆို အိမ်သာက တံခါးမရှိ အကာမရှိတဲ့… ဒီအကြောင်းကို ဟိုတနေ့ ကပဲ အိမ်က အမျိုးသား သူ့ သွားတုန်းက အတွေ့ အကြုံပြောပြနေသေးတယ်…
ပေါက်ကရပို့ စ် မဟုတ်ပါဘူးကိုပေါရေ…
ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတဲ့ ပို့ စ်လေးပါ…
ဒီမှာ တံခါးမရှိတဲ့ အိမ်သာ တွေ မျက်နှာခြင်းဆိုင်ထားတာ ထိုင်ဖူးတယ်...အစတော့ ရှက်ပေမယ့် နောက်တော့လည်း အိုကေသွားတာပါပဲ.. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မျက်နှာခြင်းဆိုင်ပေါ့ - မမြင်စေချင်ရင် သတင်းစာနဲ့ကာ.. မဟုတ်ရင် လူရှင်းတုန်း စောစောရှင်း..
တားကတော့ အကုန်ရှက်တယ်။ အိမ်သာတက်တာတောင် ဘေးခန်းက လူလာတက်နေရင် အီးတောင် ကျယ်ကျယ် မပေါက်ရဲဘူး။ မတော် အပြင်မှာ ဆုံမိရင် အီးကျယ်ကျယ်ပေါက်တာ ဒီကောင်ပေါ့ဆိုပြီး ကြည့်ခံနေရဦးမှာ...။ ရှက်ထှာ...။
>>>>ZT..... ကျေးဇူးပဲဗျိုး။ ကျနော်က လုံးဝမမှတ်မိတော့ဘူးဗျ။
>>>>မျိုးဝင်းဇော်.... အဲသည်ချောင်းထဲ ရေမချိုးမိအောင် သတိထားမှ။
>>>>တန်ခူး..... အိမ်ကလူကို ပြောထား။ အန္တရာယ်ကို လွယ်မထားပါနဲ့လို့။
>>>>ဇနိ..... ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားပြီးတော့ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ သုံးရမှာထင်တယ်။
>>>>အမည်မသိ.... စီးပွားပျက်ကပ် ဆိုက်နေပါတယ်ဆိုမှ။ ဘယ်မှာ အလုပ်လုပ်စရာရှိမလဲ။
>>>>ကိုဘွိုင်းဇ်.... ပိန္နဲပင်ကို ဆွဲထည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ လက်ပံသားကို ဓါးနဲ့ချိုင်တာပါ။ နောက်ဆိုရင် အိမ်သာထဲအီးပေါက်ချင်ရင် ဟဲန်းဖုန်းက Ring tone မြည်အောင် လုပ်ပြီး ရောချလိုက်။
>>>>အမည်မသိ.... သြော်...အရေးထဲ အိုးမလုံအုံပွင့်နေရသေးသကိုး။
>>>>မခင်ဦးမေ.... ကိုဘွိုင်းဇ်ကို အကြံပေးတာလား။
ဂျပန်မှာ ပတ်ဘလစ် အိမ်သာထဲ သီချင်းဖွင့်ထားပေးတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့က အီးကျယ်ကျယ်ပေါက်တာ၊ ၀မ်းများများသွားတာ ဘေးလူ မသိဘူးလေ...။
နောက်ဆို ဖုန်းထဲက သီချင်းကို အကျယ်ကြီး ဖွင့်ထားမှ...။
>>>> Boyz…. သင်ဟာလေ….အိမ်သာအကြောင်းကိုဆိုရင် သည်းခြေကြိုက်ပါတကား။ အိမ်သာအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင် မမောနိုင်မပမ်းနိုင်ပါတကား။
>>>> ကေကေ….. အီးဋီကာဖွင့်ရလိုက်ရတာ အသက်ရှူကို ကြပ်သွားတာပဲး-)
Like your idea... you give to ko Boyz...ha ha ha...
ကိုပေါရဲ့စာကို အသက်အောင့်ပြီးဖတ်သွားပါတယ်း)
ဟွန့်... သူ့အိမ်သာပို့စ်ထဲမှာ အိမ်သာအကြောင်း မပြောလို့ နတ်သုဓ္ဒါအကြောင်း လာပြောရမှာလား ကိုကိုပေါငှဲ့...။
>>>> shin….. ကိုဘွိုင်းဇ်အတွက် လက်ဆောင်မွန်လေ…း-)
>>>>Thant…. ပို့စ်က ဒီလောက်ရှည်တာ။ ကြားထဲမှာ နှစ်ခါလောက်တော့ နှာခေါင်းဖွင့်ပြီး တ၀ကြီး ရှူရှိုက်မိသေးတယ်မို့လား။း-)
>>>>ပုဂံပြည်မှ အိုဘွိုင်းဇ်ရာ….. အိမ်သာအကြောင်းပို့စ်တွင် နတ်သုဒ္ဓါအကြောင်း ပြောခြင်းငှာ မသင့်သော်လည်း သင်မူကား တဆိတ် မလွန်လွန်းပါစံ့။ ပဇာအရေးတို့နှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ ပြောနိုင်လွန်းခြင်းကို အတို့ကျွန် သတိထားမိသည်။ (ပုံ…. တူရွင်းတောင်ခြေမှ အညတရ ဓါးသမားလေး ကိုပေါ။)
“တစုံတယောက် အိမ်သာတက်နေတုန်း အခြားတယောက်က ၀တ်လစ်စလစ်ဖြင့် ရေ၀င်ချိုးခြင်း” ကဲ့သို့ အမှုပင်တည်း။ အချို့သူများသည် လူမြင်ကွင်းတွင် မျက်နှာပြောင်ဖြင့် ချေးပါရသည်ကို မရှက်တတ်သကဲ့သို့ပင် လောကတွင် အချို့သူများသည်လည်း မကောင်းမှုကို ဆိတ်ကွယ်ရာတွင်သာမက လူမြင်ကွင်းတွင်ပါ မရှက်မကြောက်ပြုတတ်ကြပေသည်။
WHO TOLD U “တစုံတယောက် အိမ်သာတက်နေတုန်း အခြားတယောက်က ၀တ်လစ်စလစ်ဖြင့် ရေ၀င်ချိုးခြင်း” IS SOMETHING "မကောင်းမှု"?
BTW IM Anonymous.
လူမြင်ကွင်း ချေးပါတာကို မကောင်းမှုလို့ ဘယ်သူမှ မပြောပါဘူး။ ရှက်ခြင်း မရှက်ခြင်းကို ပြောနေတာပါ။
ဒါကြောင့်လည်း အပေါ်ပိုဒ်မှာ လူမြင်ကွင်းထဲ ချီးယိုတာကို ရှက်စရာ လို့ (သဘောတူတူမတူတူ) အစမ်းသဘောလက်ခံကြဘို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။
တချို့လူတွေဟာ လူမြင်ကွင်းမှာ၊ တနည်း၊ တခြားလူရဲ့ မြင်ကွင်းအောက်မှာ ချေးယိုရတာ၊ အ၀တ်မဲ့ရတာကို မရှက်သကဲ့သို့ အချို့လူများဟာ မကောင်းမှုကို သူတပါးရဲ့ မြင်ကွင်းအောက်မှာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြုဝံ့ကြတယ်လို့ ရေးသားထားတာပါ။
I don't agree with you cause I'm from Kyaung Taw Yar and there is nothing like you said. Don't give msg like this cause you don't know anything.
>>>> Hi Anonymous,
If you were from Kyaung Taw Yar, can you tell me please how is the huge Buddha's image in KTY pagoda is called, please? And also tell me the name of the man who opened the restaurant near the pagoda and he had daughter and sons who are very good "Chin Lone" players.
စိတ်သာချ ကိုပေါ။ လုံးဝမပြောဘူး။ အဲဒီလို အမိဖမ်းလို့ကတော့ ဒီက ကြောက်လို့ တန်းနေအောင် ပြေးပြီပဲ။
(ဟဲဟဲ...Anonymous ကိုယ်စား ဖြေပေးတာ။)